25+ Chisarai Quotes nokuti Friend | Chisarai Quotes 25+ Chisarai Quotes nokuti Friend | Chisarai Quotes
Anoonekana ndiyo zvakaoma chinhu kutaura munhu. Bond chinobatanidza uye pakarepo akabva, rimwe zuva ukakumbirwa kutaura Sara mushe kuti shamwari yako, bhasi, kambani, mhuri uye chii kwete. Takaona vakanhonga 25 Chisarai anotora nokuti shamwari, mhuri, bhasi, vatinoshanda navo kuti kugoverana uvaraire bhayibhayi pamusoro katsamba rakanaka.
Chisarai zvakaoma asi zviri fanira. Ngatitore kusvika Chisarai anotora nokuti bhasi uye aonekana inoti nokuda kukoreji.
2017 Chisarai Quotes
Chisarai Quotes nokuti Friend
"Apo ndakaona nyamasase akwire pamusoro pamakomo, Ndakaziva kuti upenyu ingori muunganidzwa ndangariro. Asi nendangariro vakafanana starlight - vanogara nokusingaperi ".
Chisarai Quotes nokuti Boss
"Usachema nokuti pamusoro. Kunyemwerera nokuti zvakaitika. "
Chisarai Quotes nokuti Friends
"Nyaya youpenyu anokurumidza kupfuura nekubwaira kweziso, nyaya rudo kwaziwai, sara mushe."
Chisarai Quotes nokuti Family
"Kunyange kana uchiziva chii kuuya, haumbonyatsovi aigadzirira sei anonzwa. "
Chisarai Quotes nokuti Company
"Tinofanira kutaura akaonekana navo kuti tsika methodologies pamusoro yemakambani kumayunivhesiti." - Marcus Buckingham
Chisarai Quotes nokuti navo
"Musangano wose zvakatungamirira chokuonekana, uye saizvozvo wakaramba, chero upenyu sezvo akanga vanofa. In musangano ose, paiva vamwe kusuruvara okuonekana, asi pazvose párty paiva vamwe mufaro rokusangana pamwe. "
Chisarai Quotes nokuti vakwegura
"Kana shamwari yakanakisisa vanoti bhayibhayi kune mumwe, zvavari chaizvoizvo vachiti ndiko 'Bata pfungwa, Ini ndichava shure nokukurumidza 'Saka ndinyarare kufunga kwangu kusvikira wadzokera kunzwa vamwe. "
Chisarai Quotes nokuti vadzidzi
"Rimwe zuva pane imwe nguva, izvi zvakakwana. Usatarisa shure uye yokuchema kare nokuti aenda. Regai kuva nekutambudzika ramangwana, nokuti ane asi kuuya. Vanogara varipo uye kuita izvozvo yakanaka kuti ichava namaturo kuyeuka. "
College Chisarai Quotes
Ida vabereki vako uye kuvabata zvakanaka rudo, nokuti iwe chete kuziva kukosha kwavo kana ukaona chinhu cheya kwavo.
"Ndakadzidza kuti goodbyes kucharamba kukuvara, mifananidzo haazombofi tsiva kuva imomo, akavonga ane simba shoko, ndangariro kukanganwa dzakaoma, Mashoko hakumbofi kutsiva manzwiro, uye magamba kazhinji aende unsung. "
Buda: Happy Birthday Messages
Good chisarai prices
"Uye tiri shure pamwe chete zvakare, uye ndiri kumbobvira gonna kurasikirwa uve shamwari. "» indigo Girls
"Manzwiro Romunhu nguva dzose sendarama uye zvikuru anopenya muawa rokusanganira uye aonekana." »Jean Paul Richter
Funny Chisarai Quotes
Tinovimba nemi wakanakidzwa yedu muunganidzwa mukuru kuonekana prices uye achange kuuya shure kuongorora mamwe prices mune ramangwana. Chisarai anotora nokuti webasa uye aonekana Quotes shamwari zvinonyanya kudiwa.
Good Chisarai Quotes
"Zvinoita kusetsa. Hazvinei kuti zvakaoma unoedza, imi hamugoni kuvhara mwoyo yenyu nokusingaperi. Uye miniti iwe kurivhura kumusoro, hauzivi kuti chii chiri kuitika kupinda. Asi parinotaura, unofanira zvanyanyisa kuenda nokuti, kukonzera kana ukasazviita, hapana pfungwa pakuva pano. "» Kirstie mukoto mu "mukanwa"
Funny Chisarai Quotes shamwari
"Saka, shamwari akare, zvino inguva kutanga kukura, kutora nokuchengeta, kuona zvinhu sezvavari, akatarisana chokwadi, kwete vachangopukunyuka pavo, kuchiri zviroto, chete reshaping pavo, paaikura. "» Stephen Sondheim
Inspirational Chisarai Quotes
"Vamwe vanhu vakapinda hwedu ukurumidze kuenda. Vamwe kwechinguvana, kusiya footprints mumwoyo yedu, uye hatisi, nokusingaperi chete. "» Flavia Weedn
"Tinoziva mumwe hwedu hwose uye ikozvino tichaenda wedu unoparadzanisa nzira. Vamwe uchayeuka uye vamwe uchakangamwa mumwe, asi ticharamba tichingonzwa tine chikamu mumwe mukati wedu. "
Office Chisarai Quotes
"Hapana goodbyes kwatiri. Chero kwauri, iwe ichagara mumwoyo mangu. "» Mahatma Gandhi
Dorm Chisarai Quotes
Buda: Happy Birthday Quotes
Hostel Chisarai Quotes
"Handiyeuki zvose nguva Ndaizviudza kuti abate panhambo izvi sezvo ivo zvakaitika." »Tichiverenga Makunguwo
"Chisarai! Mwari anoziva kana tiri uchasangana zvakare. "» William Shakespeare
Chisarai Quote New
"Vaviri Zvinhu chakaomesesa zvokutaura muupenyu ndivo mhoro kokutanga uye akaonekana navo yokupedzisira."
Quote nokuti Chisarai
"History tambotaura inoti akaonekana navo. History rinoti, 'Ona imi pashure.' "- Eduardo Galeano
Unogona kuvada, vakangamwirei, unoda zvinhu zvakanaka kwavari ... asi vachiri mberi pasina pavo. rombo rakanaka nokuda kwenyu kuonekana vanhu! Chisarai anotora shamwari uye yokuonekana anotora nokuti bhasi vari kuitika uye kunyatsofungwa chaizvo.
Tags: Chisarai prices, Chisarai Quotes nokuti Friend